ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများ - BikeHike
အမျိုးအစား: ကို Maintenance
မေးခွန်း- Don Julio Blanco Y Reposado
¿Cuánto cuesta un tequila Don Julio Blanco? $579.00 Tequila Don Julio blanco es un licor que no puedes dejar de disfrutar en tus fiestas y reuniones ။ ¿Qué es Don Julio
မေးခွန်း- Don Julio Reposado ကျွန်ုပ်အနီးရှိ စတိုးဆိုင်များတွင်
Don Julio Reposado တစ်ပုလင်း ဘယ်လောက်ကျလဲ။ Don Julio tequila ပုလင်း ဈေးနှုန်းများနှင့် အရွယ်အစား ပုလင်းအမည် အရွယ်အစား ဈေးနှုန်း Don Julio Blanco 750ml $48 Don Julio Reposado 750ml
Don Julio Reposado ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်း
Don Julio tequila ပုလင်း ဈေးနှုန်းများနှင့် အရွယ်အစား ပုလင်းအမည် အရွယ်အစား ဈေးနှုန်း Don Julio Blanco 750ml $48 Don Julio Reposado 750ml $62 Don Julio Añejo 750ml $67 Don Julio 70 750ml
အမြန်အဖြေ- Don Ramon Reposado Precio Mexico
$229.00 La experiencia y la tradición de las manos mexicanas quieren que disfrutes del sabor နူးညံ့သိမ်မွေ့ y con toque de Madera del tequila Don Ramón reposado ။ ¿Cuánto cuesta el Tequila
မေးခွန်း- ဒွန်ငါးမျှားတံနှင့် ရစ်တံ ပြုပြင်ခြင်း။
ငါးမျှားတံကို ပြုပြင်ရကျိုးနပ်ပါသလား။ အဖြေကတော့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်ပြီး မင်းရဲ့ငါးမျှားတံကို ပြုပြင်ဖို့ သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပျဉ်းမကျိုး၊
မေးခွန်း- Don Julio Double Cask Reposado စျေးနှုန်း
¿Qué es mejor tequila reposado o blanco? El tequila blanco၊ al no tener tiempo de añejamiento၊ adquiere အရောင်မရှိပါ။ Su sabor es más dulce y cuenta con notas နူးညံ့သိမ်မွေ့သော y
အမြန်အဖြေ- Don Julio Reposado Vs Anejo Price
Don Julio ၏ တမူထူးခြားသိမ်မွေ့သော Añejo tequila ကို နမူနာယူသောအခါ နှစ်ယောက်စလုံးသည် ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စွာဖြင့် တမြိုက်မြိုက်ကျဲကျဲ ကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲ ကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲကျဲနမူနာများကို နမူနာယူကြည့်သောအခါတွင် နှစ်ယောက်စလုံးသည် သဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာဖြင့် တမြိုက်မြိုက်ကျဲကျဲနေပါမည်။ ပုလင်းအမည် အရွယ်အစား ဈေးနှုန်း Don Julio Blanco 750ml $48 Don
Don Ramon Reposado ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
anejo သို့မဟုတ် reposado ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ။ Reposado သည် Tequila နှင့် Ginger Ale ကဲ့သို့သော highball အချိုရည်များတွင် အရသာကောင်းသည့်မှတ်စုများကို ပေါင်းထည့်သည်။ Tequila anejo သည် နက်မှောင်ပြီး ကြွယ်ဝသောအရသာရှိပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
12... 8,119 နောက်တစ်ခု